नेपाल आइडलबाट ‘भक्कानिँदै’ बाहिरिए अमित बराल, जाँदा जाँदै यसो भने आफ्ना फ्यानहरुलाई « Niatra TV
नेपाल आइडलबाट ‘भक्कानिँदै’ बाहिरिए अमित बराल, जाँदा जाँदै यसो भने आफ्ना फ्यानहरुलाई
काठमाडौं,२२ मङ्सीर । एपीवान टेलिभिजबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल-२ को टप फाइभबाट बुटवलका अमित बराल बाहिरिएका छन्। शुक्रबार प्रसारित कार्यक्रममा उनले मीनराज पौडेलसँगै ‘खुसी छु म आज’ बोलको गीत गाएका थिए। बिहीबारको कार्यक्रममा उनले ‘कहिले आउँछ होला त्यो दिन’ बोलको गीतमा स्वर दिएका थिए ।
कार्यक्रमका अतिथिका रूपमा चलचित्र निर्देशक नीर शाह र गीतकार दिनेश अधिकारी उपस्थित थिए। अतिथि कलाकारका रूपमा चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’का कलाकार सलोन बस्नेत र सारा सिर्पाइली तथा चलचित्र निर्देशक सुव्रत आचार्य उपस्थित थिए ।
आइडलबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले नेपाल आइडललाई आभार व्यक्त गरे। उनले अब यही क्षेत्रमा संघर्ष गर्ने र त्यसका लागि नेपाल आइडलले धेरै अवसर दिएको बताए। ‘हरेक प्रतियोगी अब्बल हुनुहुन्छ, ममा केही कमजोरी भएरै बाहिरिएको होला, अहिले देखिएका कमजोरी सुधार्ने कोसिस गर्छु’, बाहिरिँदै गर्दा उनले भने। नेपाल आइडलमा आउनुअघि विदेश जाने तयारीमा रहेका अमितले आफू र आफ्नो दाजुको सांगीतिक सपना पूरा गर्न नेपाल आइडल वरदानकै स्वरूपमा आएको बताए।
बि.सं २०५१ साल असोज २ गते नवलपरासीको बर्दघाटमा जन्मिएका अमित बराल सैनामैनाबासी हुन् । बरालको परिवार पुर्ख्यौली थलो पाल्पादेखि २०४० सालमा नवलपरासी बसाई सरेको थियो ।
२४ वर्षीय अमितका बुवा जिवन बराल विगत १७ वर्षदेखि रोजगारीको शिलशिलामा कतारमा काम गर्दै आएका छन् भने आमा सीता बराल गृहिणी हुन् । बुवा अहिले विदाको समयमा घरमै हुनुहुन्छ । अमित माईलो छोरा हुन् भने एउटा बहिनी र भार्इ छन् ।
परिवारमा जेठो छोरो सुमित बरालको निकै मिठो स्वर थियो । उनले खुबै रुचिका साथ गीत गाउँने गर्दथे तर त्यस बखत अमितलाई गीत संगितमा भने त्यति धेरै रुचि थिएन । सामान्य गीत गुनगुनाउने मात्र गर्दथे ।
२०६५ सालमा आफ्ना दाजु सुमित बरालको असमायिक निधन भयो । निधन पश्चात मात्र अमितले दाजुले गीत संगित प्रति देखाएको लगावको सिको गर्दै स्व. दाजुको सपना पुरा गर्न तल्लिन हुन थाले ।
अमित नवलपरासी आईडलको टप ५ मा पर्न समेत सफल भए । योसँगै उनले बर्दघाटमा रहँदा नै सांगीतिक करिअर सुरु गरे । घर परिवारले पनि उनको सोखमा सहयोग गरिरहे ।
अमितका लागि आवश्यक बाद्ययन्त्र खरिद गर्न परिवारले कन्जुस्याईं गरेन । बरालले बर्दघाटमै रहेको न्युलाईट बोडिङ स्कुलमा कक्षा ७ सम्मको अध्ययन गरे । आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको बराल परिवार जेठो छोराको निधनपछि २०६६र०६७ सालतिर नवलपरासीबाट सैनामैनामा बसाईसराई सरेको हो ।
अमितले बसाईसराई गरे संगै प्रभात आवसीय ईंङ्लिस बोडिङ स्कुलमा कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरे । एस.एल. सी उत्तिर्ण गरी उच्च शिक्षाका लागि बुटवलमा रहेको अन्नपूर्ण मोडेल कलेजमा भर्ना भई अध्ययन गरे र प्लस टु उत्तिर्ण गर्न सफल भए ।
उनले लुम्बिनी कला केन्द्र बुटवलमा २ वर्ष सम्म संगीत सिकेका थिए । उच्च माध्यमिक विद्यालयको पढाई सकिएसँगै काठमाण्डौमा पनि उनले केही समय संगित शिक्षा लिए ।
यस क्रममा घरमा उनी बैदेशिक रोजगारमा जाने करिब निधो नै भैसकेको थियो । तर उनलाई नेपाल आईडलको पहिलो संस्करणले दाजुको सपना साकार पार्ने एउटा ठुलो अवसर प्रदान गर्यो ।
उनी नेपाल आईडलको पहिलो सिजनमा काठमाण्डौबाट अडिसन दिई थ्रेरटर राउण्डसम्म पुगे । नेपाल आईडलको पहिलो संस्करणबाट बाहिरिएसँगै उनले सिजन २ लागि सक्दो मिहिनेत गरे ।
साथै, भैरहवा अडिसनबाट छनोट भई नेपाल आईडलको दोस्रो संस्करणको यात्रा तय गरेका हुन् । नेपाल आइडल सिजन २ मा अमितले राम्रो प्रस्तुति दिदै आएका छन् ।
उनले केही अंक पहिले गाएको गीतले त कयौंको आँखा रसाएको थियो । अमितले ‘पन्छी’ बोलको गीत गाउँदा निर्णायक इन्दिरा जोशीको आँखाबाट त बरबरी आँशु निस्किएका थिए । त्यही गीतबाट अमितले थप दर्शक-स्रोताको मन जितेका छन् ।
त्यो गीतले मात्रै होइन उनले अन्य अंकमा दिएका प्रस्तुतिले पनि स्रोतादर्शकको मन जितेका छन ।